Led Corn Light Bulbs, Led Corn Lights, Corn Bulb Manufacturer na China
Nkọwa:Led Corn Light Bulbs ,Ejiri Mgbacha,Ọka Bulb,Ọkụ Kasị,,
Home > Ngwaahịa > Led Corn Bulbs > Led Corn Light Bulbs
Ngwaahịa nke Led Corn Light Bulbs , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Led Corn Light Bulbs , Ejiri Mgbacha suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọka Bulb R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ọkpụkpa oriọna LED ọka 100W 5000k 13000lm  Kpọtụrụ ugbu a
120 Watt E39 LED Corn Light Bulb 15600lm  Kpọtụrụ ugbu a
butere ọkụ bọta ọka 80W  Kpọtụrụ ugbu a
10400lm 80W duuru ọka 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
80 Watts E39 butere bọlbụ 10400lm  Kpọtụrụ ugbu a
Ike dị elu duuru ọka ọka 80W  Kpọtụrụ ugbu a
80W duziri bọlbụ ọka 100-277VAC  Kpọtụrụ ugbu a
Ibe kọmpụta LED ọka E39 Bulb 100W  Kpọtụrụ ugbu a
100W E39 butere bọlbụ 13000lm  Kpọtụrụ ugbu a
100W duuru ọka 5000K E26 / E39  Kpọtụrụ ugbu a
E26 E27 Corn Cob Light Bulb 15W  Kpọtụrụ ugbu a
E26 E27 12W Okpuru Umu Akwukwo Nsogbu 277 Volt  Kpọtụrụ ugbu a
GU24 E27 9W Ejiri Ọkụ Klaasị maka ire ere  Kpọtụrụ ugbu a
9W E27 Led Corn Cob Retrofit Bulbs  Kpọtụrụ ugbu a
6W E27 Led Corn Cob Light Bulbs 3000K  Kpọtụrụ ugbu a
9W E27 Led Corn Cob Light 990lm  Kpọtụrụ ugbu a
E27 6W Ọkụ Mkpụrụ Bulb Led 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
80W Ọka Ọkụ Na-agba Ọkụ 10400LM  Kpọtụrụ ugbu a
30W Led Corn Bulb E27  Kpọtụrụ ugbu a
E40 20w Led Corn Bulb 26000lm 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
E27 Led Corn Bulb Dimmable 60W 7800LM  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkpụkpa oriọna LED ọka 100W 5000k 13000lm Bbier 100W bu ọka ọka, igwe anaghị acha ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Ọka bọlbụ ìhè na-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb USA karịrị awa...
120 Watt E39 LED Corn Light Bulb 15600lm Bbier butere ọka ọka , akwa mmiri dị mma maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a mere ka ọka Oriọna-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED anyị E39 12 0W Led Bulb Light karịrị...
butere ọkụ bọta ọka 80W Bbier duziri bọlbụ ọka ọkụ , igwe anaghị agba ọkụ dị elu maka LED na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a mere ka ọka Oriọna-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED anyị nke E39 80W Led Bulb Light karịrị...
10400lm 80W duuru ọka 5000K Bbier 80W butere ọka ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn bọlbụ oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke E39 80W Led Bulb Light...
80 Watts E39 butere bọlbụ 10400lm Bbier butere ọka ọka , akwa mmiri dị mma maka LED na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn bọlbụ oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke 80W Led E26 Bulb Light karịrị...
Ike dị elu duuru ọka ọka 80W Bbier 8 0W butere bọlb bọl bọlbụ , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Mere Ọka Oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke 80W Led E26 Bulb Light...
80W duziri bọlbụ ọka 100-277VAC Bbier 8 0W butere bọlb bọl bọlbụ , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a butere oriọna ọka maka ebe a na-adọba ụgbọala chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke...
Ibe kọmpụta LED ọka E39 Bulb 100W Bbier 100W butere bọlbụ ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a butere oriọna ọka maka ebe a na-adọba ụgbọala chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke...
100W E39 butere bọlbụ 13000lm Bbier 100W butere bọlbụ ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn Bulb Light na- azọputa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb Brazil karịrị...
100W duuru ọka 5000K E26 / E39 Bbier 120W duziri oriọna E40, igwe ọkụ dị elu maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn Bulb Light na- azọputa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb USA karịrị awa...
The 15W Led Ọkụ Mbara Amazon dochie bọtịnụ nke 50W na nke a Dlc Led Corn Light nwere ike ịchekwa ruo 90% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Ruo 1800 N'ihe dị ka afọ 1800, ìhè igwe ojii na-acha ọcha, ndị ọka Cob Light Bulb na- apụta ìhè na mpaghara buru ibu...
12W Led Corn Bulb Lowes na- anọchi bọlbụ 40W na nke a Led Corn Bulbs for Sale nwere ike ịchekwa ruo 90% na ọkụ eletrik ọkụ. Ruo 1440 Ọtụtụ ìhè nke ìhè n'ehihie, ìhè ọkụ ndị a na-acha ọkụ ọkụ 277 Volt na- agbasa n'otu mpaghara buru ibu, ma...
The 9w Led Corn Bulb Review bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 9w Led Corn Bulb Menards bụ nkwụsị zuru okè maka mgbidi bọtịnụ 18W. A na-eji ihe ọkụkụ 9w Led nke Ahịa maka ire ere ma ọ bụ na- eji n'ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, ezumike ụlọ. Igwe ihe...
The 9w Led Corn Bulb Amazon bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 6w Led Corn Bulb Home Depot bụ zuru okè nhazi maka 18W incandescent bọlbụ. Ewunye Ewf E27 Led Corn Cob Retrofit Bulbs enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ahịa a na-ahụ...
Ngwa Led Corn Cob nke 6w bụ 110LM / W 3000K na nke a 6w E27 Led Corn Lamp bụ ngwụcha zuru okè maka mbubata bọtịnụ 18W. Ndị E27 Led Corn Cob Light Bulbs enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ọkụ a na-ahụ maka ọdịmma nke ebe obibi a na-acha...
Ọnụahịa otu: USD 7 / Piece/Pieces
Onu ogugu ugbua nke Led nke 9w bụ 110LM / W, Day White 5000K na nke a 6w ọka Light Fitting bụ nkwụsị zuru okè maka oghere nke 18W incubescent. The 6w E27 Led Corn Cob enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ntụ ọka ọka wit nke e27 na-eduzi...
Ọkụ 6w anyị bụ Mkpụrụ Igwe Ọkụ Na-acha bụ 110LM / W, Day White 5000K na 6w Corn Cob Led Light bụ nkwụsị zuru okè maka 18W incandescent bọlbụ. Onu ogugu kpocha nke 6w na Cob Light Fitit enwere ike iji ya na ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Igwe ọkụ bọmbụ...
Ejiri ọka ahụ bụ ihe na-egbuke egbuke na 130lm / w elu watt to lumen output ratio. Ejiri Igwe Ọkụ a 80w na-edochi bọmbụ 250W ka ọ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Na 80w ọka Cob Ìhè enweghị radieshon, ọ dịghị ọkụ ọkụ, Na-aga n'ihu ma...
The Led Corn Bulb 30w na -egbuke egbuke na 120lm / w elu watt to lumen mmepụta ogo. Nke a Led Corn Bulb 50w na- anọchi 150W na-agbanye bọtịnụ mgbe ị na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Na Ọka Ọkụ E27 adịghị enwe okpomọkụ, ọ dịghị ọkụ ọkụ, Na-aga...
Anyị Led Corn Bulb 20w bụ ihe na-egbuke egbuke na 130lm / w elu watt to lumen output ratio. Nke a 20W Led Corn Bulb Canada dochie bọmbụ 70W ka ọ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Egwurugwu Led Ebube E40 enweghi nchapu ọkụ, ọ dịghị ọkụ ọkụ,...
Ihe E27 Led Corn Bulb Dimmable bụ oke na-egbuke egbuke na 120lm / w akwa watt to lumen output ratio. Nke a bụ 60W ọka Bulb maka ụlọ ala na-etinye 200B na bọlbụ ma ọ bụ na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. Nyocha ọka ọka ọka enweghị radieshon,...
China Led Corn Light Bulbs Ngwa
Led Corn Light Bulbs bụ kpọmkwem ihe ngbanwe maka 50W - 500W Mercury Vapor & Metal Halide Lamps. Egwurugwu Kwara Ọhụụ Ezigbo maka n'okporo ámá, ọnụ mmiri dị elu, post elu na ndozi na-adabaghị adaba ma n'ime ime ụlọ ma n'èzí. A na-edozi Mkpụrụ ọka iji dochie ụdị nke dị ugbu a na nke Ọdịdị Mmiri , nke a na-achụpụ kpamkpam.
Led Corn Light Bulbs Ejiri Mgbacha Ọka Bulb Ọkụ Kasị